काठमाडौं महानगर : बालेनले पाए ४३ हजार मत, कसको कति ? « Lokpath
काठमाडौं महानगर : बालेनले पाए ४३ हजार मत, कसको कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा सुरुवाती अग्रता कायम गरेका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता बढाउँदै लगेका छन् ।
हालसम्म बालेनले ४३ हजार १ सय ६२ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसो त उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहभन्दा १७ हजार ५ सय ६३ मत माथि रहेका छन् । हालसम्म सिंहले २५ हजार ५ सय ९९ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
त्यसैगरी मतका हिसाबले तेस्रो स्थानमा पुगेका नेकपा एमालेका केशव स्थपितले २५ हजार २ सय ६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यता उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले अग्रता कायमै राखेकी छिन् । हालसम्म उनले ४५ हजार ८ सय ७५ मत प्राप्त गरेकी छिन् । भने उनलाई करिब ३० हजार मतभन्दा बढीले पछाडी रहेर गठबन्धनका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले पछ्याइरहेका छन् । उनले हालसम्म १५ हजार २ सय ८२ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी राप्रपाका उम्मेदवार बिनिता मगैयाले ७ हजार २३ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: २०७९,जेष्ठ,९,सोमवार ०९:१६
एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)ले मूल्यवृद्धि विरुद्ध एक् साता लामो आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार
प्रचण्ड र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बिभागका मन्त्रीबीच भर्चुअल बैठक
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नवनियुक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बिभागका मन्त्री लिउ जियान्चाओबीच भर्चुअल बैठक भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टी सभापति
धरानकाे बजेट एक अर्ब ६८ करोड, मेयर कोषमा १ करोड २० लाख र उपमेयर कोषमा ८० लाख विनियोजन
सुनसरी । धरानको एघारौं नगरसभामा उपमहानगरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०काे बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०